कालापानीमा देखियो यस्तो अनौठो दृष्य ! नेपाली शसश्त्र प्रहरीलाई भारतीय सेनाले दियो मिठाई र फूल, हेर्नुहोस् भिडियो – Dainik Sangalo
कालापानीमा देखियो यस्तो अनौठो दृष्य ! नेपाली शसश्त्र प्रहरीलाई भारतीय सेनाले दियो मिठाई र फूल, हेर्नुहोस् भिडियो
August 17, 2020 501
काठमाडौ । नेपाल र भारतकाबीच यतिवेला सिमा वि वाद छ । सिमा वि वाद बढ्दै जाँदा नेपालले भारतीय सिमानामा सुरक्षा बढाएको छ । सबैभन्दा बढी विवाद भएको कालापानी क्षेत्रमा नेपालले पछिल्लो समय सुरक्षा बढाएको हो । कालापानीमा अहिले नेपाल र भारत दुवै तर्फवाट चासो धेरै छ । त्यहाँ भएका गतिविधिलाई नेपाल र भारत दुवै तर्फका सर्वसाधारण देखि विशिष्ट ब्यक्तिका लागि चासो बन्छन् । शनिवार दार्चुलाको खलंगामा भएको एउटा घटनाले पनि सबैको ध्यान तानेको छ ।
धेरै समय पछि अंग्रजकालिन त्यहाँको पुलको पुलका ढोका खुले। दार्चुलाको खलंगाबाट सशस्त्र प्रहरी र भारतको धार्चुलाबाट एसएसबीका अधिकारीहरुको पुल बीचमै भेटे । एसएसबीका धार्चुला कमान्डेन्टले सशस्त्र अधिकारीहरुलाई मिठाई र पुष्पगुच्छा दिए। सशस्त्र अधिकारीले पनि पुष्पगुच्छासहित शुभकामना दिए, ‘ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्ट डे।’ धेरै दिन पछिको यो पुर्नमिलन अर्थपूर्ण थियो। सशस्त्र अधिकारीहरुले भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा त्यहाँका समकक्षीहरुलाई बधाई र शुभकामना दिए।
नेपाली सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुईवटा अर्ध सैनिक बलका अधिकारीहरुको यो भेटले स्थानीयस्तरमा भने सम्बन्ध सुधारको नयाँ कडीका रुपमा पनि हेरिएको छ। शनिवारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतीय समकक्षीलाई टेलिफोन गरेका छन् । उनीहरुका बिचमा लामो समय देखिको सम्बादहिनताको अन्त्य भएको हो । आपसी समझदारीका विषयमा कुराकानी भए । पछिल्लो पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि जनस्तरमा समेत वारीपारीको सम्बन्ध चिसिएको छ।
शनिबार दिउसोको त्यो दृष्यले भने परम्परा मात्रै धानेन, स्थानीय स्तरमा पनि सम्बन्ध सुदृढ गरिराख्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। झोलु¨े पुलमा दुवैतर्फका सुरक्षा निकायलाई लामो समयपछि एकसाथ उभ्यायो। चिसिएको सम्बन्धलाई केही हदसम्म भएपनि यसले न्यानो बनाउने काम गरेको ढंगले पनि यो दृष्यलाई अथ्र्याउन थालिएको छ। हातमा फुलका गुच्छा बोकेका सुरक्षाकर्मीहरुले एक अर्कालाई आदान प्रदान गर्दा उनीहरुको मुहार उज्यालो देखिन्थ्यो।
बिहान ठिक ११ वजे पुलको बीच भागमा शुभकामना आदानप्रदान हुँदा वारिपारिबाट त्यो दृष्य जिज्ञासापुर्बक हेरिरहेका थिए सर्बसाधारण। वारीबाट दार्चुलास्थित सशस्त्र प्रहरीको ४४ नं। गणका गणपती एसपी नरेन्द्र बम, कालापानी मुनिको छाङरुस्थित गुल्मका डिएसपी धिरेन्द्र शाह र पारीबाट एसएसबीको धार्चुलास्थित क्याम्पका कम्पनी कमान्डेन्ट कश्मिर सिंहसहित अन्य सुरक्षाकर्मी आएका थिए।
Prevजनकपुर कि जानकी (पुष्पा अधिकारी ) को सन्तान मोह ले जन्माएको प्रश्न र कानुनको कठघरामा उभिएका ११ बालिकाहरुको भबिस्यको फैसला आज
Nextछिमेकी र आफन्त मलामी नगएपछि मुस्लिमले गरे हिन्दू संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि
कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताललाई सामग्री बाँड्दै महाविर पुन
जे बिक्छ, त्यही बेचौं भन्ने मानसिकता हाबी हुन थाल्यो: दीपकराज गिरी
आज असार १५, देशभर धान रोपाइ दिवस मनाइँदै